रमाउनलाई अर्को मान्छे चाहिने नै हो र? :: Setopati
रमाउनलाई अर्को मान्छे चाहिने नै हो र?
क्रान्तिशिखा धिताल कात्तिक १७
तपाईंलाई बिदाको दिन कसैले बोलायो। तपाईंलाई निस्किन मन छैन।
एकपल्ट सोच्नुहुन्छ, 'के भन्ने?'
निक्कै बल गरेर बहाना बनाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, 'सरी यार आज फुर्सद छैन।'
'सरी आन्टी आज आउन पाउँदिनँ।'
वा भन्न खोज्नुहुन्छ, 'सरी, मलाई आज एक्लै बस्न मन छ। आफूसँगै समय बिताउन मन लागेको छ।'
तपाईंले यस्तो भनिहाल्नुभयो भने सुन्ने मान्छे चुप बस्दैन।
बरू उल्टै प्रतिप्रश्न गर्छ, 'किन हामीसँग आउन हुँदैन?'
र सायद तपाईंले नसुन्ने गरी भन्छ, 'आजकाल ठूलो भएको छ!'
म पनि तपाईंजस्तै त्यसरी ठूली हुनु नपरोस् भनेर कसैले बोलाए भने मन नलागीनलागी पनि निस्किदिन्छु। कुनै दिन केही गरी 'एक्लै बस्न मन छ, यो हप्ता आफ्नो लागि समय दिनु छ' भनिहालेँ भने अजिबका प्रश्न तेर्स्याइन्छ।
'कोठामा कोही आउँदैछ?'
'डिप्रेसनमा जान लागिस् क्या हो?'
माथि भनिएजस्तै 'केही' हुँदा मात्रै एक्लै बसिन्छ र? एकान्त मन पर्नलाई बिछोड हुनै पर्ने हो र? रमाउनलाई अर्को मान्छे चाहिने नै हो र? एक्लै आफूसँगै रम्न खोज्नु गलत हो त?
माया गर्ने र बुझ्ने भनेको सम्बन्धमा पनि एक अर्कालाई 'स्पेस' नहुने हुन्छ? कि आफू जे हो एकअर्कालाई नभनी बनेका सम्बन्ध यस्ता हुन्छन्? आफू के हो, आफूलाई के/को मनपर्छ भनेर बुझ्नलाई 'छुट्टै' समय चाहिन्छ। यस्तो विशेष समयको हामी कुरा किन गर्न सक्दैनौं?
केही दिन पहिला 'मोबाइल भनेको पर्सनल चिज हो' भनेको एउटा सन्दर्भ सम्झिएँ। तर के यसले हामीलाई पर्सनल हुन दिएको छ?
तिनले मलाई ब्युँझाए, झकझक्याए! मेरो जीउ बाहिर भरिएका अरूका लागि भएका 'म' हरूलाई टक्टक्याए। म यी भित्तासँग खुसी हुन्छु। म हाँस्दा यिनको चमक अर्कै हुन्छ। रुँदा मेरा भित्ता पनि दुखी हुन्छन्। म कहिलेकाहीँ यीसँग संवाद गर्छु।
माया पाउने आशमा समस्यामूलक व्यक्तिगत सम्बन्ध तन्काइन्छ। अनि कहिलेकाहीँ काम पाउने/गुमाउने लोभले व्यावसायिक जीवनमा 'कम्प्रोमाइज' गरिन्छ। तर दुवैमा आफू हुन नपाए के मजा?
शिवपुरी जंगलमा गएर मस्त गालिबका गीत सुन्न खोज्छु म। कोही त होला जसलाई त्यसरी गालिब सुन्ने 'म' मनपर्छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १७, २०७७, ०४:००:००